Iipolisi ezilula zeTable Tennis / Ping-Pong
I-X ne-H Simple Drill
I-X ne-H Simple Drill. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukukhangela i-ping-pong drills elula ukukhumbula kodwa isasebenza kakuhle? Ndihlanganisene kunye nenombolo elula kodwa esebenzayo yetafile ye-tennis, engafuneki ukuba i-Masters degree ikhunjulwe kodwa isenzela umsebenzi.
Umqhubi we-X kunye no-H ngowona uninzi lwabathathi be-tennis abaye benza ngexesha lokuqeqeshwa kwabo.
Ukwenza i Drill
Njengoko kuboniswe kumzobo, uMdlali A udlala ibhola phantsi, ngelixa uMdlali B ehlasela ibhola. Elula, akunjalo? Kodwa nangona ukuloba okulula okunjengale, kusekho iindlela zokufumana ezininzi ngaphandle kwe-drill ngaphezu kokuba uhamba nje ngaphandle kokucinga.
Ukuba ngaba uMdlali we-A nomdlali we-B bayixabisa ibhola, i-drill iba ngumsebenzi ohamba phambili kunye ne-stamina drill, apho abadlali abafanelekileyo abanokukwazi ukugcina i-rally nganye ihamba ixesha elide, ngaphandle kokuba uMdlali B (obetha i-crosscourt, eyona nxaxheba elula ) iqinisekisa ukuba ibhola liphela kumdlali we-A elifikelela kumsebenzi ongezantsi. Ukuba uMdlali A unzima ukufikelela kwibhola, i-smart Player B iya kushaya ibhola elilandelayo endaweni elula, ivumela uMdlali A ukuba aphinde abuyele ngokulinganisela kunye nokuzinza, kunye nokwandisa i-rally. Ingcamango ukubeka uxinzelelo komnye nomnye, kodwa kungabi nxinzelelo olunzulu kangangokuba iphupha liphela ngokukhawuleza.
Ukuba Umdlali A uvimbela kwaye uMdlali B ukhwela, le drill yithuba elihle kuMdlali B ukuze asebenze ngokubhekiselele kwi-forehand ye-Player A kunye ne-backhand, isifo esingaqhelekanga ngokwaneleyo. Inqakraza apha kukuba uMdlali B uqale ukukhwela umgca ongenawo ububanzi obuninzi, kwaye ukhulise ngokukhawuleza i-angle, ngelixa uvumela uMdlali ixesha ukuba alungele ukubekwa kwebhola. Ukuba Umdlali A unzima ukufikelela kwibhola ngexesha, uMdlali B unokunciphisa ama-angles, okanye u-loop nge-spin ephindaphindiweyo kunye nesantya esingaphantsi, unike uMdlali A ixesha elide lokuhamba.
Ukuba uMdlali A ukhonkxa kwaye uMdlali B uvimba, uMdlali B unako ukwenza uMdlali A umsebenzi kakhulu, kuba uMdlali B uya kuba nako ukuvimba ngeengalo ezibanzi. Kwakhona, uMdlali B kufuneka aqale ngeengxinjana ezincinci, kwaye akhuphule ngokukhawuleza, agcine uMdlali A ngaphantsi koxinzelelo kodwa angenzeki uMdlali A ukuba afinyelele ibhola. Kwakhona, ukuba uMdlali A ufumanisa nzima ukufikelela kwibhola, unako ukukhwela ngokukhawuleza kunye nejubane elincinane, ukumnika ixesha elingakumbi lokubuyela kwaye uhambe kwindawo elandelayo.
Le ngqungquthela enzima ye-drill, kuba kunzima ukuhambisana nokukhawuleza nokukhupha. Bobabini abadlali kufuneka baqwalasele ngokukhawuleza kokuhamba ngeenyawo kunye nokubekwa ngokuchanekileyo kwebhola ukwenzela ukuba lo msebenzi uphelele. Nangona kunjalo akunakwenzeka ukuba iindibano ezininzi ziza kudlula ngaphezu kwe-5 okanye 6. Abadlali abaphambili kuphela.
Umdlalo omfutshane Umqhubi olula
Umdlalo wemizuzu emfutshane. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Oku kuqhuba kulula ukwenza, kodwa kusebenza kakuhle kubadlali abafuna ukuphucula umdlalo wabo omfutshane ngokukhawuleza.
Njengoko kuthethwe kumzobo, umdlali omnye kufuneka asebenze kabini , kwaye omnye umdlali makazame ukubuyisela ibhola ukwenzela ukuba ihlasele kabini kwicala lomncedisi wetafile. Ukuba ibhola ibuyiselwe kakhulu okanye ide kakhulu, omnye umdlali kufuneka ahlasele ibhola, kwaye iphuzu kufuneka lidlalwe.
Oku kuluhlu olulula, kodwa akunakwenzeka konke ukwenza lula. Xa umchasi wakho ehluke ngokutshintsha kwakhe nokubeka, kunzima kunzima ukuyifaka ibhola ukuze iqhubise kabini ecaleni kwetafile. Kwakhona kulula kakhulu ukuba ulandelelwe kwisigqi sokunyusa imfutshane, kwaye uphelelwe amathuba okuhlaselwa.
Kodwa xa lo msebenzi wenziwa ngokugxininisa, kuyindlela enhle yokufunda indlela yokuvala ukuhlaselwa kwamandla omdlali, ukumphoqa ukuba aqhube ibhola endaweni yokusebenzisa i-loop ukuze aqale ukulandelelana kwakhe, kunye nokubonelela ngamathuba amaninzi okukhusela flick e namandla.
Abadlali abaphezulu badla ngokulawula abadlali bezinga eliphantsi ngokulawula umdlalo omfutshane, ukukhusela abachasi babo ukuba bavule ngelixa behlasele iibhola ezibalaseleyo. Abo badlali abanqwenela ukufudukela kumazinga aphezulu omdlalo kufuneka benze le ngxowanxheba ibe yingxenye yoqeqesho lwabo rhoqo.
Umgca wokuPhathwa kweMigca elula
Umqhubi wePlacourt Placement. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Lo mbhobho ulula ephezulu, kuba abadlali bobabini bamele basebenzise iinkundla zangaphambili zecala lomdlali kumdlali ukuba bakwazi ukukhonza, (kunye nokuqala kokukhwabanisa kunokuba kukho nayiphi na inxalenye yetafile, ngelixa i-second bounce kufuneka ukuba yinkantolo yomntu oyifumene nayo), kodwa iphuzu ludlalwa ngokusetyenziswa kuphela ngeenkundla zangaphambili.
Le drill iya kubangela ukuba abadlali bobabini baphinde bacinge ngemilinganiselo yomdlalo. Yintoni ekufuneka isetyenziswe ukwenza kube nzima kumchasi ukuba abuyisele ibhola kwinkantolo yakho ngaphambili? Yiyiphi into eyenza ukuba kube lula utshintsho ukudlala ibhola ngaphambili, ekubeni uyazi ukuba ibhola iya kubuyiselwa phi?
Ekubeni umchasi wakho uyazi ukuba inkundla ikulindela ibhola, ingqinelana ekuhlaseleni ibaluleke ngaphezu kwamandla, kuba kunzima ukungabikho mdlali? Ingaba kusenokwenzeka ukuba uphumelele umdlali wakho - ngaba iibhola ezibanzi zilandelwa ngokutshatyalaliswa ngqo kumdlali?
Ngaba umdlali uzama ukudlala yonke ibhola ngephambi kwakhe, okanye kufuneka asebenzise i-backhand yakhe xa ekhutshwa ngaphandle kwesimo?
Ngokucacileyo, inkundla ye-backhand yomdlali ngamnye isetyenziswe kwakhona, ukuphoqelela izigqibo ezifanayo ukusuka kwicala le-backhand. Ngaba abadlali baya kuthatha isigqibo sokudlala ikakhulukazi babo ngaphambili, okanye i-backhand yabo?
Ngokusebenzisa umtya okanye umthamo wee-tape, kulula ukukhubazeka ngamnye umdlali, ngokubanzi okanye ukunciphisa indawo ejoliswe kuyo. Abadlali abanamandla banokukhuphisana nabadlali ababuthathaka ngokulinganayo ngokulungelelanisa iithagethi zabo.
Phansi kwePlay Drill Drill
Phansi kwePlay Drill. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Le drill ifana ne-dricourt placement drill, kodwa ngoku abadlali basebenzisa inkundla phantsi nganye.
Ngokubhekiselele kwi-drillour drill, le-drill ikhuthaza abadlali ukuba bathathe isigqibo malunga nokubekwa kwebhola, kunokuba nje baphose ngebhola ibhola enkundleni. Kwakhona kuphakamisa imibuzo efana naleyo ephakanyiswe ngumgca we-crosscourt.
Ngaphandle kokusetyenziswa ngokucacileyo kwendlela yokudlala, kuya kuba nako ukucacisa ukuba abadlali bobabini basebenzisa uhlangothi oluthile nje, umzekelo, abadlali bobabini kufuneka basebenzise izinto zangaphambili, okanye uMdlali A kufuneka asebenzise phambili xa uMdlali B esebenzisa kuphela i-backhands.
Ngokuqinisekileyo, ubukhulu beendawo ezijoliswe kuzo zingasetyenziswa ngokusetyenziswa komtya okanye amathoni. Indawo ekujoliswe kuyo iyakhethwa njengowokushiya okanye ngakwesokudla kwiteyimu yokulinganisa, ukuvumela indawo ekujoliswe kuyo ukuba ibe phakathi kwelayini kunye ne-tapeline kunye ne-sideline kunye ne-tape.
Ngaphambili I-Drill elula
Ngaphambili I-Drill elula. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukukhawulela umdlali omnye okanye bobabini ukuba babhekise phambili (okanye backhand) imivimbo elula kakhulu, kodwa ineempembelelo ezinomdla kwiinjongo zoqeqesho.
Dlala umdlalo omnye okanye ngaphezulu ukuya ku-11, kodwa uMdlali A uvumelekile ukuba asebenzise i-raber yakhe yangaphambili, kungekho nto ivumelekile. Ingcamango kukunyanzela uMdlali A ukuba adlale ukubethelwa kwangaphambili kunye nobuchule obuhle, ngoko ukuphosa ukukhangela kwesandla ukusebenzisa i-Seemiller-type backhand akuvumelekanga-kubadlali beSemiller!
Ukuqala, vumela uMdlali B ukuba asetyenzise zombini kunye nokubetha kwe-backhand.
Umdlali A uya kufumana inani leenzuzo ezivela kulo mqulu, kuquka:
Umdlali A uzakufuneka akhethe ukukhonza ngokunyamekileyo, ukuze azame ukumphoqa uMdlali B ukuba abuyisele ibhola apho uMdlali A ulindele khona. Ukukhonza ngokungakhathali kuya kwenza uMdlali B ukuba asebenzise kakubi umdlali we-Player A okanye ebanzi phambili.
Umgangatho oncomekayo ugxininiswa, kuba uMdlali A ucelwa ukuba aguqulwe itafile yonke ngokubhekiselele kwicala lakhe.
Umdlali A uya kufuneka athathe ingqalelo kwisimo sakhe sokubakho enkundleni ngethuba lomhlangano, kwaye uzame ukubeka ibhola ukuze angashiywe kwinqanaba lakhe. Oku kuya kunyanzela uMdlali A ukuba enze izigqibo ngokukhawuleza malunga nokuba ubekaphi ibhola ngokwendlela yakhe yenkundla.
Umdlali A uya kunyanzelwa ukuba adlale ngokugqithiseleyo, kuba uya kufuna ukugqiba loo ngangoko ngokukhawuleza. Umdlalo omncinane uza kunika uMdlali uB ithuba lokufumana ibhola kumdlali we-Player A's backhand kungekudala okanye kamva, kwaye iphuzu liya kulahleka.
Le drill iya kugxininisa ukuba imfuneko kangakanani impilo xa umdlali enqwenela ukuba ngumhlaseli ophiko oluphethe iphiko elibuthakathaka kakhulu.
Umdlali B uya kufumana i-drill inzuzo ekufundeni indlela yokuxhaphaza ubuthathaka babadlali abanamandla amakhulu kodwa i-backhand ehluphekileyo.
Ukwahluka okulula kulo mgca kuwukunyanzela uMdlali weB B ukuba adlale ngokuzikhangela nje, kwimeko apho bobabini abadlali baya kuba phantsi kwengcinezelo. Ezinye iintlobo ziquka ukuvumela uMdlali B ukuba adlale phambili kunye ne-backhands, kodwa kwisiqingatha esithile senkundla yeMdlali A, ukulinganisa izithintelo kubadlali bobabini.
I-Drift Ball Target Simple Drill
I-Drift Ball Target Simple Drill. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukusebenzisa ibhola ephukileyo njengento ekujoliswe kuyo kuyindlela elula yokusebenza ngokubeka ibhola - kwaye simele sijongane nayo, ngekhwalithi engafanelekanga yeebhola ezingama-40mm namhlanje , uhlala ufumana ibhola ephukile kwindawo ethile! Vele uchukumise icala elilodwa kwibhola, kwaye unomxholo ogqibeleleyo oza kuhlala etafileni ngaphandle kokujikeleza!
Ukwahluka okulula kwalolu shilo kukukuba uMdlali A ahlasele ibhola ngethuba lakhe ngaphambili, esebenzisa i-loop, ukuqhuba okanye ukutshiza njengoko ufuna. Umdlali Imizamo yokubetha ibhola echanekileyo kathathu, ukugcina umkhondo weendlela ezininzi ezenza ukuba enze njalo. Umdlali B uyalinqanda ibhola kuMdlali A, ukugcina ibhola kwinkantolo yangaphambili yoMdlali A.
Ngokurekhoda inani lemivimbo elithatha iMdlali A ukuba libethe ibhola elijoliswe kwixesha eli-3, kunokwenzeka ukulinganisa ixesha elide ukuba uMdlali A uphucula amandla akhe okubeka ibhola kwindawo ekujoliswe kuyo.
Umdlali A uya kuphucula amandla akhe ekubetheni ibhola endaweni ethile enkundleni, kungakhathaliseki ukuba umdlali uliphi na ibhola. Le yikhono elixabisekileyo eliza kusetshenziswa xa uMdlali A efuna ukubeka ibhola ukuba asebenzise ubuncwane bobuthathaka bomdlali.
Ngaphandle kokumane nje wenze lo mgobo usebenzisa i-backup yomdlali we-Player A, kukho inani lezinye iinguqu ze-drill ezingasetyenziswa.
Umdlali B unokuba nebhola ekujoliswe kuyo ukuze ajonge kwakhona, ukunika umdlali ofana noqheliselo olufanayo kunye nebloko lakhe.
Ibhola elijoliswe kwibini lingasetyenziselwa kwindawo eyahlukileyo, njengekhonkco ye-Player B, okanye umdlali we-Player B odlala ibhola, enikela uMdlali A ukuba akhethe iithagethi. Oku kukukhuthaza ukuphuhliswa kwesigqibo sikaMdlali A, kuba kuya kuba namaxesha apho ibhola elijoliswe kuyo elilodwa lilula ukubetha ngaphezu kwelinye, kwaye uMdlali A kufuneka azame ukubetha ithagethi elula.
Umdlali B unokuvunyelwa ukuba abeke ibhola naphi na enkundleni yoMdlali A, okwenza kube nzima nzima kumdlali. Ukusetyenziswa kweebhola ezijoliswe kwiqela ezininzi kunokusetyenziswa kwakhona kulo mzekelo, umzekelo ukuba uMdlali B ubeka ibhola kumdlali we-Player A's backhand Inkundla A kufuneka ibetha ibhola ekujoliswe kuyo 1, kwaye ukuba ibhola lihlala enkundleni yakhe yangaphambili, uMdlali A kufuneka ahlasele ibhola ephambili. 2. Oku kukukhuthaza umdlali u-A ukuba akwazi ukubona apho uMdlali B uhlasela ibhola, kwaye unqume ngokukhawuleza ukuba yintoni ekujoliswe kuyo jolise kuyo.
I-drill ingasetyenziselwa ngemivimbo efana ne-push, flick, okanye ukusika , ukuze usebenzise ezinye iindlela.
Elibanzi Ngaphambili Ukuhlaselwa kwe-Opening Drill elula-Inyathelo 1
Ixesha elide Ngaphambili Ukuhlaselwa kwe-Opening Drill elula-Inyathelo 1. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Le ngxowa yandisa kakhulu isalathisi esilungelelaniso esilungele ukukhwela kwangaphambili. Ngokulula ngokungongeza ukukhonza nokukhonza ukubuyela kwi-drill, sandisa iintlobo ngeendlela ezininzi.
Umdlali A usebenza ngokuphinda kabini kunceda phambili kumdlali weMdlali B. Umdlali B uze uqhube okanye uphendule ibhola ngokubanzi kunokwenzeka kwi-Front A yangaphambili, ukusika i-sideline apho kunokwenzeka khona. Umdlali A ukhawuleza, uqhube okanye utyhobole ukubuyela kumgca wecala lomdlali uB, kwaye uMdlali B uyalinqanda ibhola kwiNkundla yoMdlali A phambili. Ukususela apho isiseko sangaphambili se-forehand sokukhangela kwangaphambili isithintelo sokubamba siyaqhubeka njengesiqhelo.
Kukho iinzuzo zeMdlali A xa wenza le drill.
Ubuninzi bokuzibhokoxa ngokuphindaphinda kabini kunomgca, ngowona unzima kunzima ukuqhuba kakuhle, kunye neendawo ezibuthathaka ezichasene nazo.
Umsebenzi onyawo olungileyo usebenza ukususela ekubeni uMdlali A kufuneka ashukume ngokukhawuleza ukufihla ububanzi obukhulu bokubakho, aze abuyele kwindawo yokuvala ibhloko likaMdlali B. Ukuhamba ngokubanzi kwicala langaphambili kubuthathaka obuninzi kubadlali abaninzi, ngoko ke eli lihle ithuba loMdlali A ukuba asebenze kule ndawo.
Umdlali A uya kufuneka akhethe phakathi kokuvula ukuhlaselwa kwakhe kwi-push return okanye flick return. Oku kuya kuphucula ukwenza isigqibo phantsi koxinzelelo, kwaye kunika uMdlali A ithuba lokuba asebenze kuzo zombini iintlobo zokuvula (ukusuka kwi-backspin kunye ne-topspinpin).
Xa uMdlali A evulekile kwi-push return, uya kulungelelanisa uhlangothi lwakhe lokuhlaselwa okuzayo, okuya kulwa nebhola elincinci. Olu lungiso luyinto into abadlali abaninzi abafumana ngayo kunzima ekuqaleni, ngoko ke ukusebenza okunye kuya kuba luncedo.
Umdlali B uya kuzuza kwi-drill, kuba uya kufikelela ekusebenzeni ukubuya kwakhe ekusebenzeni kwinqanaba lakhe elifutshane (ebuthathaka bamaninzi amaninzi), kwaye unokukwazi ukuzibuyisela ngokukhawuleza ibhola ngokubanzi kunokwenzeka ukuze kube nzima Umdlali A ukuhlasela kakuhle, okuyinto iqhinga elifanelekileyo ukuqonda. Umdlali B unokuphinda asebenze ekunqandeni kwakhe ukulwa noMdlali A.
Elibanzi Ngaphambili Ukuhlaselwa kwe-Opening Drill elula-Isinyathelo 2
Elibanzi Ngaphambili Uhlaselo oluvulelekileyo Ukuvula i-Drill elula-Inyathelo 2. © 2007 Greg Letts, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ezinye izinto ezilula ezi zikhoyo ziquka:
Vumela uMdlali B ukuba abuyele umgca wakhe phantsi komgca kunye nomgca ogqithiseleyo, oya kumenza uMdlali A alinde ade akwazi ukubona apho uMdlali B ebeka khona ukubuyisela ukukhonza kwakhe.
Vumela Umdlali B ukuba avimbele nayiphi na indawo, eya kumenza uMdlali A abuyele ngokukhawuleza emva kokushaya ukuhlasela kwakhe kwebhola yesithathu.
Vumela uMdlali A ukuba ahlasele kuyo nayiphi na indawo, eya kwenza uMdlali B asebenze kanzima ekunqandeni kwakhe.
Vumela abadlali bobabini ukuba batshale ibhola kuyo nayiphi na indawo emva kokuba ukukhonza nokukhonza ukubuyiswa sele kugqityiwe, okuya kubangela ukuba abadlali bobabini basebenze kanzima ukulawula ulungelelaniso.
Sitshintsha indawo yokuhlasela kwebhola yesithathu yoMdlali A kumdlali we-Player B, kwaye ube nomgcini weMdlali B kwi-Player A ngaphambili. Oku kunika uMdlali A ithuba lokusebenzisa ukuhlaselwa kwakhe kokuvula kwaye ulandele umgca.
Kuyafana nohlobo oludlulileyo, kodwa uMdlali B uvimba ibhola ediagonally cross-to-go to Player A's backhand. Umdlali A ngoko udlala ukuhlaselwa kwe-backhand kwisibloko se-Player B.
Ukuba usebenze ixesha elide, vumela uMdlali B ukuba aqhube okanye aqhube ukubuyela kwakhe kunoma yiphi indawo kwaye i-rally ingadlala. Oku kuya kuqakraza kuMdlali A kaninzi kangakanani ukukhonza ibhola ixesha elide.
Ngaphambili UFlick / Backhand Uhlasele i-Drill elula
Ngaphambili UFlick / Backhand Uhlasele i-Drill elula. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Umdlali A ukhonza ukuphinda kabini ukukhonza kunoma yiphi indawo. Umdlali B unokukhetha ukubuyisela ibhola emfutshane kumdlali we-A ngaphambili, okanye ngokujulile kwi-backhand yoMdlali A. Ukuba ukubuya kufutshane, uMdlali A amanyathelo kwaye udlala i-flick ngaphambili kwiindawo. Ukuba ukubuya kunzulu, Umdlali A uvala okanye uqhube ibhola kuyo nayiphi na indawo. I-rally iyadlala.
Umdlali A ufumana inani leenzuzo ezivela kulo mqulu, kuquka:
Isiqhelo sakhe sokuncedisa kabini ukukhonza.
Ukwenza izigqibo kunye nokusebenza kweenyawo, kuba uMdlali A kufuneka akhethe ngokukhawuleza phakathi kweentlobo ezimbini ezahlukileyo ezidlalwa kwiindawo ezikude, kwaye uqhube kwisithuba ngexesha lokudlala isisu esifanelekileyo ngokufanelekileyo nangempumelelo.
I-Technique practice ye-flick yakhe ngaphambili kunye nokuhlasela kwe-backhand.
Isiqhelo sokulandelelana kwangaphambili sakhe ukuhlaselwa kwebhola yesihlanu , okanye ukuqhubela ibhola lakhe lesithathu ngebhokisi lakhe.
Umdlali B naye uncedo kwi-drill ngeendlela eziliqela, njenge:
Umsebenzi wokukhonza kwakhe ubuyela kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo.
Indlela yokubeka indawo, kuba uMdlali B uza kubuya kwindawo ehlukile kuxhomekeke ekubeni uya kubuya ibhola elifutshane okanye elincinci.
Kukho iindlela ezininzi zokutshintsha le drill ukuphumeza iziphumo ezahlukeneyo.
Ukuba uMdlali B unenkathazo yokufumana ukubuyela kwakhe kumfutshane, uMdlali A unokunceda ibhola ibe mfutshane kakhulu, kunokubambelela kabini ukukhonza, okuya kwenza kube lula kuMdlali B ukuyeka ibhola emfutshane xa ufuna.
I-drill inokuguqulwa, kunye noMdlali B ebuyela kumfutshane kwi-backhand yeMdlali A, kwaye adala ixesha elide kuMdlali A phambili.
Umdlali B unokubuyisela ibhola elifutshane kunoma yiphi indawo, ukunyanzela uMdlali A ukuba anqume ukuba ucofa ibhola nge-backhand yakhe okanye ngaphambili. Umbuyiselo ophezulu weMdlali B kufuneka uqhubeke kwi-backhand.
Ukwenza ukubuyiswa komsebenzi kube lula kuMdlali B, uMdlali A unokusebenza kwindawo echanekileyo kunye nohlobo oluchanekileyo lwe-spin.
Umdlali B unokubuyela kwindawo enzulu kunoma yiphina indawo, kodwa ubuyisela ibhola kumphambili weMdlali A xa ebuyela emfutshane.
Counterloop Simple Drill. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Nangona i- double bounce ekhonzayo yindlela yokwenza inkonzo ephezulu eyenziwa ngabadlali bezinga eliphezulu, oko akuthethi ukuba ukukhonza ixesha elide akukaze kusetyenziswe. Ukusetyenziswa ngokubulumko kwinkonzo enokude kunokunyanzela ukubuyiswa komntu obuthathaka kwi-opponent, ukuvumela ibhola ukuba ihlaselwe ngokugqithiseleyo ekuhlaselweni kwebhola yesithathu .
Umdlali A ukhonza ngokukhawuleza ukukhonza (ukuhlawula ngaphakathi kweeyintshi ezisi - 6 zomgca ), okanye umkhonza osilela ukuphindaphinda kabini kwinkundla yoMdlali B. Umdlali B uvale okanye aqhube ibhola kwiNkundla yoMdlali we-forensic, kwaye uMdlali A uzama ukumelana nebhola kuyo nayiphi na indawo. I-rally iyadlala.
Ukukhonza okukhawulezileyo kusetyenziswa ukumangalisa umchasi, kwaye ngethemba lokuba uya kumbamba ngaphandle kwesikhundla, mhlawumbi umqhekeze okanye amenze alulale ibhola. Umsebenzi ogqithiseleyo umgca wokugqibela usetyenziselwa ukwenza ukuba umchasi anganqikazi, engaqinisekanga ukuba ibhola liya kubetha kabini etafileni okanye ihambe ngaphaya komgca. Oku kuya kuba nethemba lokuba uhlaselo lwabachasi lube buthathaka kunezinto eziqhelekileyo, uvumele umncedisi enze i counterloop eqinile.
Umdlali A ufumana inamba yeenzuzo ezivela kulo mqulu, kubandakanya:
Ukusebenza kwexesha elide leenkonzo zeentlobo ezahlukeneyo, kwaye ukhonza ukuba ucacise umgca wokugqibela ngenjongo.
Ukuqhayisa ukulwa naye kwebhola njengoko kulandelwa kwinkonzo yakhe. Ngokuqhelekileyo eli phethini linyanzeliswa kuba abadlali baqala umkhuba wabo wokuqhawula umxhasi ngelixa sele bemi kude netafile.
Isiqhelo sokwenza izigqibo, kuba kufuneka athethe isigqibo sokuba uza kufaka ibhola yakhe yesithathu ukwenzela ukuba athathe ulawulo lwendawo.
Ukufunda nokuqinisela ingcamango yokuba nje umchasi wakhe uhlasele ibhola, oku akuthethi ukuba umdlali kufuneka ahambe ngokuzikhusela. Ukuhlaselwa kakubi kumdlali wakhe kungakwazi kwaye kufuneke kuphetshwe.
Umdlali B ufumana umgangatho ofanelekayo, njengokuba:
Ukusebenza kokubuya kwakhe kobudlova. Umdlali B kufuneka azame ukwenza ukubuyela kwakhe kumsebenzi kunzima kumdlali we-A ukulwa ngokuphumelelayo.
Ithuba lokuthatha isigqibo sokuba uya kuzikhusela okanye uqhubeke ucinezela ukuhlaselwa kwakhe, kuxhomekeka ngamandla omdlali we-A counterloop. Oku kusemgangathweni kwimiba yemidlalo, apho ezo zigqibo kufuneka zenziwe phantsi kwengcinezelo.
Vumela uMdlali A ukuba akhonze kunye nakwezinye izihlandlo, kwaye udlale iphuzu.
Umdlali B ubuyela kumgca we-backhand weMdlali A.
Umdlali A ungalandeli ibhola kwiNkundla yeBademy B ngaphambili, kwaye umdlalo uqhubeka udibanisa.
Amabini kwi-One Drill elula
Amabini kwi-One Drill elula. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukusetyenziswa kwabadlali ababini ukubetha umdlali omnye kuba yinkqubo yokugqithisa kune-drill elula ngokwayo, kodwa ndicinga ukuba ifanelwe iphepheni yayo ukuba ixoxe ngendlela yokwenza ubuninzi beli qhinga. Le nqubo inokunceda ngokukhethekileyo ukuba unomdlali oqinileyo kunye nabadlali ababini ababuthathaka kunye kunye, nokuba ngabadlali abangaphezulu ngaphandle komlingane.
Iphulo elilandelayo kule ndlela yokuqhubela phambili kukukwenza uMdlali A asebenze nzima kunokuba eqhelekileyo, ngokubambisa iingenelo zokuba ngabadlali ababini abenza njengomdlali omnye. Ukuze wenze oku kusebenzayo, kulunge ukuba uMdlali B unombono onamandla, kwaye uMdlali C unesibindi esinamandla. Umdlali B kufuneka azame ukugubungela inkundla yakhe ngangokunokwenzeka, ngokufanelekileyo, kwaye kufuneka afake inkundla encinci yenkantolo yoMdlali C ukuba ulungele ukwenza njalo. Umdlali C uhlanganisa zonke iibhola ebanzi enkundleni yakhe kunye ne-backhand yakhe, kwaye unokubambisa encinci inkundla yeMdlali B ukuba uMdlali B ungaphandle kwesimo, ukuze agcine i-rally.
Ukuba uMdlali B kunye no-C basebenzisana ngokufanelekileyo, kufuneka badibanise ukubeka uxinzelelo oluninzi kuMdlali A, ekubeni kufuneka kube nzima kuMdlali A ukuba athole ikhefu kwinkcazo yaso yenkundla. Kwaye ekubeni abadlali bobabini banenkundla encinci yokumboza, kufuneka babe nako ukufikelela kwisimo ngokulula, bavumele ukuba bahlale balinganise kwaye bavelise izibetho ezinamandla.
Umdlali A uza kuxhamla kule nkqubo yokuqhubela phambili, ekubeni kufuneka abekwe ngaphantsi komngcipheko ophezulu, kwaye nayiphi na iipolisi ziyakudla ixesha elide. Xa kwenziwe ngokufanelekileyo, kufana nokuqeqeshwa kweMdlali kwi-player level level.
Abadlali B kunye no-C kufuneka bagxininise ubuchule babo nokubeka ibhola. Ekubeni banomhlaba omncinci wokufihla, kufuneka babe nokukwazi ukufudukela kwisimo ngokulula, ukuphucula umgangatho weengxabano abazifumanayo.
Le ndlela ingasetyenziswa kwiifolisi ezininzi, kwaye ingasetyenziselwa ukudlala imifino, apho abadlali B kunye no-C badibanisa ukulinganisa umdlali ophezulu okhuphisana noMdlali A.
I-Ball Aim I-Drill elula 4 - Ngeenombolo
I-Ball Aim I-Drill elula 4 - Ngeenombolo. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Inkundla yeMark Player B kwiindawo ezili-6. Ekubeni kunzima ukubeka ibhola kufuphi nomnatha, iibhokisi eziphawulwe ngaphaya komgca kufuneka zibe ziincinci kuneebhokisi ezikufutshane nomnatha. Inombolo kufuneka inikezelwe kwindawo nganye, njengoko kuboniswe kumzobo.
Ukwahluka okulula kwalokhu kuqhutshwa kukuba abadlali bobabini basebenzise isisindo esisisiseko, njenge-push or counterhit . Umdlali B utshitshisa ibhola kumdlali we-A phambili, kwaye njengoko ehlaba ibhola ubiza inamba phakathi kwe-1 no-6. Umdlali A kufuneka azame ukubeka ibhola endaweni echazwe.
Izinzuzo zomdlali A ziquka:
Ukufunda ukubeka ibhola ngokuxhomekeka kwimoya yangaphandle, kunokukhetha nje indawo kwindawo engaqhelekanga. Oku kukwazi ukulungisa ukufakwa kwebhola kuya kuba luncedo njengoko uMdlali A ephucula amandla akhe 'okufunda' wakhe umchasi. Abadlali abalungileyo banokugweba indawo efanelekileyo yokubeka ibhola ngokuxhomekeka kwimizimba yomzimba, umgangatho, kunye nekhono lomdlali. Umdlali oshaya ibhola ngokukhawuleza ngaphandle kokuqwalasela umchasi wakhe uya kuba nzima ukubetha abadlali abangcono.
Ukufunda ukutshintshisa i-stroke yakhe ngeendlela ezahlukeneyo zokubeka ibhola kwiindawo ezahlukeneyo zetafile. Ngokomzekelo, ukuba uMdlali A uyayiphikisa, unokufaka ibhola kwiNgingqi 3 ngokubetha ibhola ngokugqithiseleyo ukuze idlule kwiNdawo 6, okanye ngokugqithisa ibhola encinane ukuze idibanise ngokuthe ngcembe. Kwakhona unokubetha ibhola elincinci ukwenzela ukuba liqhubele phambili kunye namazwe kwiNgingqi 3 endaweni yeNdawo 6.
Umdlali B unokusebenzisa ukhetho olukhethileyo lweendawo ukuze afundise uMdlali A indawo ezifanelekileyo zokubeka ibhola ngokuxhomekeka kwinkqubela ye-rally, kunye nesimo somdlali wakhe. Umzekelo, ukuba uMdlali A ubeke ibhola enzulu kwiNgingqi 1, ukuhambisa umdlalo weBlack B phambi kwakhe nangemuva etafileni, uMdlali B angabiza umnxeba 6, ukuze uMdlali A abeke ibhola kwindawo enzima kakhulu Umdlali B ukufikelela. Okanye unokubiza umnxeba 1 kwakhona, ukukhuthaza uMdlali A ukuba ahlasele ibhola ngqo kuye, enethemba lokuba ujonge ukudlala kwakhe.
Vumela uMdlali B ukuba abeke ibhola kuyo nayiphi na indawo.
Yiba nomdlali weB umdlalo, kwaye ngoko umxake uMdlali A ukuba abuyisele ibhola apho uMdlali uB ulindele khona. Oku kuza kuqakraza indlela umncedisi onamandla unalo, kuba unako ukunyanzelisa umdlali wakhe ukuba abuyisele ibhola apho ulindele.
Ukudlala njenge-rally evamile, yonke imivimbo evunyelwe.
I-Pivot Forell Drill yangaphambili
I-Pivot Forell Drill yangaphambili. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Umdlali onokukwazi ukukhonza ibhola, kodwa umsebenzisi osebenzayo kufuneka afune ukubuya. Inkonzo ingaba nayiphi na indawo ukuba ifunwa, kodwa ukubuyela kweenkonzo kufuneka kube kwinqanaba le-backhand ye-server. Bobabini abadlali kufuneka baqhube ukuqhubela ibhola kunye ne-backhands yabo, kwinqanaba le-backhand nganye.
Umdlali B kufuneka axhose ibhola ukusuka kuma-1-5 amaxesha ngokulandelana, ngelixa efuna ukubuyela okufanelekileyo ukuhamba ngekona yakhe yebhanki aze athabathe umgca we-front or drive . Ukuqala noMdlali B kufuneka azame ukukhetha ukubuyisela okuza kwenza ukuhlasela kwakhe kwangaphambili kube lula. Njengoko ephucula, unokuzama ukuhlasela ukubuyisela okunzima.
Umdlali A kufuneka axhose ibhola kumaxesha ama-1-5 ngokulandelana kwikhonkco ye-Player B, ekutshintsheni indawo yokutshintshela kwikhonkco leMdlali iB ngaphambili. Ukongeza, ukuba uMdlali A ubona uMdlali B uqala ukujikeleza ngekona lakhe, Umdlali A kufuneka axhose ibhola phantsi komgca ukuze abambe umdlali B kwindawo.
Xa uMdlali B edlala ngokuhlaselwa kwangaphambili, i-rally kufuneka idlalwe ngokuthanda.
Umdlali B ufumana inani leenzuzo ezivela kulo mqulu:
Unako ukusebenzela ukukhonza kwakhe, ukubuyisela ukubuyela, kunye ne-backhand, isisebenzise ukukunceda ukusetha ukubuyela okulula ukuhlaselwa.
Umdlali B uya kusebenza ngokubhekiselele kwi-push-up, kunye nomsebenzi wakhe wokuhamba ngokubinikela ngakwesobunxele kunye nelungelo lokudlala umdlalo wakhe wangaphambili.
Uya kuphucula amandla akhe okukhetha ukubuyela okufanelekileyo ukuhlaselwa ngumbono wakhe ngokuphambana nekona lakhe le-backhand, kwaye uya kufunda kwakhona ukuba angahambi ngokukhawuleza xa ezama ukuza.
Uya kuphucula ikhono lakhe lokufunda umchasi wakhe, ngokuzama ukugqiba xa uMdlali A oza kutsho ibhola phantsi komgca.
Umdlali A naye uncedo kwi-drill kanje:
Unokwenza umsebenzi wakhe, ukubuya kokukhonza kunye ne-backhand, uyisebenzise ukwenza ibhola nzima ukuba uMdlali B ahlasele.
Kananjalo uya kuphucula amandla akhe okufunda umchasi wakhe, ngokuzama ukujonga xa uMdlali B uzimisele ukujikeleza i-backhand yakhe, kwaye uthatha isenzo esifanelekileyo ekuqhubekeni ibhola phantsi komgca esikhundleni.
Ezinye izinto ezilula ziquka:
Yenza indawo yokuqhubela i-counterdrives endaweni.
Vumela uMdlali B ukuba adibanise ne-backhand yakhe, ngelixa uMdlali A ekhusela endaweni yoko.
Qala ngokutshintshana, kodwa emva kokuhlaselwa kweMdlali B, qhubeka kunye nokutshintshwa kokuthintela.
Jonga kudlala i-Elbow Simple Drill
Jonga kudlala i-Elbow Simple Drill. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Iingcamango zangemva kwesi sikhokelo kukuvumela umdlali ukuba aqonde kakuhle ukuba unako ukulawula ukuhlaselwa kwebhola yesithathu kwindawo ehambelayo - kulo mzekelo, umdlali wakhe odlala umdlalo.
Umdlali A unokunceda ibhola kunoma yiphi indawo, kwaye uMdlali B kufuneka abuyele ibhola kwiinkantolo zangaphambili zeMdlali A (mhlawumbi iphakamileyo ngokwaneleyo okanye ixesha elide lokuba uMdlali A ahlasele). Umdlali B kufuneka ahambe kwenye indawo akhethiweyo, kwaye ulinde kule ndawo, ngelixa ukhangele isikwere ukuya kwindawo apho uMdlali A azodlala ibhola.
Umdlali A kufuneka afune ukudlala ibhola lakhe lesithathu, kwaye uzame ukubeka ibhola ukuze ihambe phakathi kwesithuba phakathi kwe-Player B kunye ne-hip yayo yangakwesokudla (oko kukuthi udlala ibhola). Umdlali B akufanele azame ukushaya ibhola, kodwa kufuneka agcine ngokuqhubekayo ukuze uMdlali A abone ukuba uye wakwazi ukujolisa ngempumelelo ibhola.
Le drill inenzuzo enkulu kuMdlali A, kuba uya kufumana isenzo kwi:
Ukukhonza kunoma yiphi indawo.
Ukuqhuba ukuhlaselwa kwebhola yesithathu ngokuphumelelayo ngaphambili.
Ukufunda ukugcina umkhondo wentshukumo yomdlali wakhe enkundleni, ukuze uMdlali A angenjongo yokudlala ngokukhawuleza.
Umdlali B unokuthi asebenze ngokubuya kwakhe, nangona kunjalo.
Ukukwazi ukubeka ibhola ngokukhawuleza kumdlali odlala umdlali uyisakhono esiluncedo kunoma yimuphi umgangatho womdlalo. Kwinqanaba elisezantsi lingaba neengongoma ezicacileyo ngenxa yeempazamo zompikiswano ekujonganeni nebhokisi elingenakwenzeka. Kwimilinganiselo ephezulu yenza kube nzima ukuba umchasi ahlase okanye aphephe ibhola enjalo, ebalulekileyo ekugcineni ukulawula le ngongoma.
Vumela uMdlali B ukuba abuyele kuyo nayiphi na indawo, ukuphoqelela uMdlali A ukuba adlale ebini phambili kunye ne-backhand yesithathu ukuhlaselwa ibhola.
Vumela uMdlali B ukuba abuyisele ibhola mfutshane ngokwaneleyo ukuyeka uMdlali A ukukhwela okanye ukuqhuba , ukuba unako. Kulo mdlali Umdlali A kufuneka aqhube okanye afake ibhola kumdlali we-Play B wokudlala, ukuze enze ukuba kube nzima kuMdlali B ukuba aqale ukuhlaselwa kwakhe.
Ukuba uMdlali B ubuyisela ibhola elifutshane, vumela uMdlali A ukuba azame ukubuyisa ibhola esifutshane kunye nokuba ufuna. Ngoku umdlali wokuqala wokuhlasela ngempumelelo ibhola kufuneka ajonge ukudlala ibhola lomdlali wakhe, ngubani omele amele ukuvumela umhlaseli ukuba abone ukuba ubeke ibhola ekujoliswe kuyo.
Ukugcina iBhola ephantsi - Izithuba zokuThuthuka kweNtetho
Izithuba zokuThumela iiNtshukumo zeNgcaciso kwiBhola ukuphakama kweBhola. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukugcina ibhola phantsi kwe-net kubaluleke kakhulu kwiimidlalo, ngokukodwa xa ukhonza, ubuyela umkhonza, uphakamisela, kwaye udlala amacwecwe ehlwayo. Xa senza umsebenzi, kuba sithatha ukujamelana nomgca wenetha (kunye nokujonga phantsi ukusuka phezulu), akusoloko kulula ukuchazela ukuba ibhola lihamba ngaphaya kwenetha.
Ukusetyenziswa kwezandiso zentsimbi kunokuba luncedo kakhulu ekukuvumela ukuba ukhangele ukuba ugcina ibhola ephantsi ngokwaneleyo-kwaye yindlela elula enokuzongezwa kwiibhola ezininzi. Kwakhona kulula kakhulu ukwenza!
Okokufunayo ukwenza i-Post Post Extensions
Awudingi ukuchitha i-fortune ukwenzela ukwandiswa kwenetha eluncedo. Yonke into oyifunayo i-PVC okanye iiplastiki zamanzi ezinkulu ngokwaneleyo ukuba zitshise phezu kwezithuba zakho zethunti, ezinye iisuthi kunye neebhontshi kunye ne-drill (okanye ezinye izipikili kunye nesando), enye intambo okanye umtya, kunye nekhanga elihle okanye ubone ukusika iibhubhu. Akufuneki ukuthetha, lo ngumsebenzi kubantu abadala okanye abantwana abane-supervision yabantu abadala.
Ukwenza i-Net Post Extensions
Sika ii-tubes ubude - mhlawumbi inyawo (30cm) okanye i-1½ feet (45cm).
Sika i-slot kwibhola ngalinye elibanzi ngokwaneleyo ukutsalula intambo yenetha, ukuze udibanise i-tubing phezu kwesithuba ngasinye somnatha.
Beka isikhonkwane kwi-tubing nganye ngaphaya kwe-slot oyinqumbileyo, ukuze i-tubing ihlale ekhonkileni ngaphezulu kweso sithuba, kwaye ayiyi kuphumla ngentambo yomnatha. Unokufuna ukunqumla intonga yesikhonkwane ukuze kungabikho uphupho olubukhali olukhomba. Okanye ungayifaka umgodi nge-tubing, kwaye usetyenzise i nut kunye ne-bolt endaweni yoko-ndingacebisa ukusebenzisa i-nut kunye ne-bolt ngokwam.
Ukuba usebenzisa izipikili, faka izikhonkwane eziliqela zidibanise i intshi okanye zodwa ngaphandle kwiphubhu nganye. Yishiye intloko yesikhonkwane ngaphandle kwebhubhu, ukuze ubophe intambo ejikeleze intloko yesipiko. Ukuba usebenzisa i-nut kunye ne-bolts, gxobhoza imingxuma ethile ephezulu kwi-tubing, uhlukanise intshi enye. Ungasebenzisa i-nut kunye ne-bolt kwi-tube nganye, udibanisa intambo nge-nut. Izipikili okanye imingxuma edibeneyo iya kukuvumela ukuba uguquke ukuphakama kwentambo - unganciphisa intambo njengoko ulungele ukugcina ibhola phantsi.
Ukubopha intambo ekuphakameni okufunwayo.
Yiyo leyo! Ngoku usebenzise isilula esilula ukuvumela ukuba ukhangele ubude bakho obusebenzayo, usebenze ubuyisela, uphakamise kwaye uphonsa amahlumela. Nika ityala - unokumangaliswa ukuba uphakamise kangakanani ukukhwela kwebhola yakho kwi-net!
I-Footwork Speed ​​Speed ​​Drill
I-Footwork Speed ​​Speed ​​Drill. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Le ndlela yokulula yokunyusa ukwenzela ukwandisa isantya sakho seenyawo isetyenziselwa kakuhle xa kuqhutyelwa ibhola kwindawo enye. Ndiza kuchaza indlela yokusebenzisa ubu buchule malunga ne-forehand loop drill.
Umdlali A wenza i-login ngaphambili, ngelixa uMdlali B evimba ibhola emuva kwinkantolo yangaphambili yoMdlali A. Emva kokubetha isigxina sakhe, uMdlali A kufuneka ngokukhawuleza athathe isinyathelo esincinci sokungqubuzana ngakwesobunxele sakhe, uze ujike umgca kwisandla sakhe sokunene ukuze udlale isigxina esilandelayo.
Umdlali A kufuneka aqalise ngesinyathelo esincinci sokuhamba, kwaye njengoko isantya sakhe seenyawo siphucula, unokuzama ukuqhubela phambili.
Kukho iinzuzo zeMdlali A xa wenza le drill, kubandakanywa:
Ukwenyuka kwesantya se-foot - Umdlali A uya kuphucula ngokukhawuleza isantya sakhe seenyawo ukuba wenza lo msebenzi ngokuchanekileyo.
Ifomu ephuculwayo kunye nokulinganisela - ukwenzela ukuba uphumelele ukwenza le drill, uMdlali A uya kufuna ifomu elungileyo kunye nokulinganisela, okanye mhlawumbi akayi kubuya ngexesha lokushaya isigxina sakhe esilandelayo. Abadlali abasebenzisa kakhulu i-swing okanye bathambekele kuncike kunokuba bahambe ezinyaweni baya kulungelelanisa ukuze bazalise le drill.
Umdlali A uya kusetshenziselwa ukuhamba emva kokushaya ibhola, endaweni yokuma.
Ukuba i-drill inzima kakhulu, uMdlali A unokuqala ngomdlalo wesithunzi ukwenzela ukuba ulandelele umsebenzi wakhe.
Umdlali A unokusebenzisa isinyathelo sokujiya ngakwesokunene sakhe, ukuze atshintshe phakathi kokuhamba ngakwesobunxele kunye nelungelo lakhe emva kokushaya ibhola.
Ukuba Umdlali A ufumanisa nzima ukuzinyanzela ukuba ahambe ngokukhawuleza, wabeka umgca kumgangatho kumdlali oshiywe ngeteksi okanye ngomtshini , ulandelelwano oluya kumgca wetafile. Yiba nomdlali Ukunyuka kwicala lasekhohlo lomgca emva kokushaya ibhola, uze ubuyele ngakwesokudla ukushaya isithintelo sakhe esilandelayo.
Yenza umdlali A enze uhlangothi lwesithunzi xa ehamba ngakwesobunxele. (Oku kuya kwenza kube nzima kakhulu ukuloba.)
Sebenzisa izibhengezo ezicothayo, ezifana nokuqhuba okanye ukukhawuleza, ukunika uMdlali A ixesha elide lokuhamba phakathi kwemivimbo.
Iibini ezimbini zeTable Drill Technique
Iibini ezimbini zeTable Drill Technique. © 2007 Greg Letts, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukuphunyezwa kweeBili ezimbini zeTable Table Drill Technique
Ngokubeka isicatshulwa sesibini kwisigxina sikaMdlali kwi-net, uMdlali B unako ukufikelela kuma-angles angaphezulu kuneMdlali A, ngelixa uMdlali A kufuneka afake indawo engaphezulu kwetafile kuneMdlali B. Kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa ezi izinto zokuphucula uqeqesho lwakho, kuquka:
Umdlali B unokusebenzisa ii-angles ezongezelelweyo kunye nommandla wetafile ukuphoqa uMdlali A ukuphucula umgangatho wakhe kunye nezakhono zokubuyisela. Umdlali B uya kukwazi ukubeka ibhola ekufikeleleni okulula kuMdlali A kwimizila yomibini (into engekho ngokuqhelekileyo eyenzeka ngokuqhelekileyo), ukuphoqelela uMdlali A ukuphucula ukubuyiswa kwakhe nokulindela.
Ummandla wetafile eyongeziweyo kunye neengcingo zivumela uMdlali B ukuba akhethe ezinye izinto ngokubeka ibhola, ngokunyusa ukwandisa amandla okudlala kuMdlali B. Ngokomzekelo, kwi-drill evamile ukuba uMdlali B aqhube umdlali kwi-A wide front, kwaye uMdlali A ubuyisela ibhola kuMdlali Inkundla ye-backhand ye-B, kunzima uMdlali B ukunyanzela Umdlali A kakhulu ngokubanzi ngenxa yokuncinci kwetafile, ngaphandle kokuba uMdlali B ngumdlali ophambili kunye nolawulo oluhle kunye neendlela zokulwa. Kodwa ngeesibini zeetafile zecala ngapha nangapha, uMdlali B unokunyusa uMdlali A ngokubanzi phambi kwakhe njengesiqhelo, aze amfudule ngokubanzi kwisibetho esilandelayo ngaphandle kobunzima, kungakhathaliseki ukuba uMdlali ubeka ibhola. Ngaloo ndlela, uMdlali B uyakwazi ukulinganisa umdlali ongcono kangcono kunokuba umdlali oyiB B ngokwenene, ukuze kuzuze uMdlali A.
Isiqingatha setafile esongeziweyo singasetyenziswa kwiifolda eziqhelekileyo, ukuvumela uMdlali B ukuba ajolise iithagethi eziqhelekileyo zisondele kakhulu kumda wetafile. Ukuba isibhozo sakhe sasiyilahleka itafile, i-rally ingaqhubeka ngoku endaweni yokuyeka.
Akuyimfuneko ukusebenzisa onke ama-4 quadrants eesigxina seesibini zeetafile. Ngokulungelelanisa indawo yeesibini zeetafile zincinci kwinkundla yesiqingatha okanye ngasekunene, kunokwenzeka ukuba usebenzise ama-quadrants angama-3 endaweni yoko, kunye nesigxina sokugqibela esisekhohlo esinqununu okanye sokunene esele singasetyenziswanga. Oku kunokuba luncedo kakhulu ukuba unqwenela ukudlala imikhosi yokusebenza kunye nomchasi onamandla onxamnye nomdlali onamandla kakhulu, kuba lidlala kwintsimi.
Umdlali A unokuzuza kwizinto ezilula kakhulu kuMdlali B ukubetha iingqungquthela ezigqithiseleyo, ukuvumela ukuqhuba ngakumbi kuMdlali A kwiindawo ezivela kumdlalo, kodwa oku kunzima ukuziphindaphinda ngokuqhubekayo kwisetyenzi esiqhelekileyo.
Ukudlala i-Elbow Simple Table Drill
Umzobo wokudlala i-Elbow Simple Drill. © 2008 uGreg Letts, onikwe ilayisenisi kuAng.com, Inc.
Lo mgca olula wokudlala, njengoko uchazwe kwisalathisi esilandelayo, unokunceda kuMdlali A kunye noMdlali B.
Umdlali A unokuzuza ngeendlela ezilandelayo:
Uzuza ekusebenzeni ekujoliseni ukudlala ibhola lomdlali wakhe.
Uyakwazi ukuxhaphaza amathuba anziwe ngumdlali ongenakufumana ngokukhawuleza kwaye ngokuchanekileyo emva kokuphazamiseka.
Ukwenza kwakhe izigqibo kufuneka kuphuculwe, ekubeni uMdlali A kufuneka anqume ngokukhawuleza ukuba uMdlali B unobungozi kwi-stroke ephazamisayo, kunye naluphi na ulwalathiso.
Umdlali B naye ufumana iindidi zeenzuzo ekusebenzeni lo msebenzi:
Kumele athathe isigqibo ngokukhawuleza nokuba angasebenzisa ingaphambili yakhe okanye i-backhand ukuba ibetha ibhola ebekwe kwindawo edlala kuyo. Njengoko ibhola ihamba kancane kwelinye icala okanye enye yokudlala ibhola, uMdlali B kufuneka aqikelele ukuba ukhetha indlela enokukhetha ngayo, ngokuqhelekileyo ibe yinto yokukhwabanisa iibhola eziza kummandla we-backhand webala lokudlala kwakhe, kwaye kufanayo kunye neengaphambili. Abadlali abaneengqungquthela ezinamandla banqwenela ukusebenzisa iziganeko zabo ngokubhekiselele kwiibhola eziza kuthi zize zingene kwicala le-backhand lokudlala kwabo.
Kumele agxininise ekubuyiseni i-racket yakhe kwindawo engafanelekanga, ukuze akwazi ukudlala i-forehand okanye i-backhand elula. Oku kusemgangathweni kumdlalo, kuba kuthintela uMdlali B ukuba angena kwi-stroke ethile ekuqaleni.
Kumele kwakhona aqinisekise ukuba uphinde abuyele kwindawo yokudlala ngokungathathi hlangothi, kuxhomekeke kumgca wokudlala. Ukuba uMdlali B uhambela kwelinye icala ukuze adlale ibhola, aze akhohlwe ukuba abuyele endaweni, akayi kuba yindawo ekulungele ukulungelelanisa, kwaye uMdlali A uya kukwazi ukusebenzisa le nto ngokudlala ibhola kwinqanaba elibanzi esishiywe evuliwe nguMdlali B. Oku kuya kufundisa uMdlali B ukuba kufuneka ahlale ekhangele ukuba ahambe kwindawo efanelekileyo yokulungelelwa kwesifo sakhe esilandelayo.
Umdlali B unokudlala ibhola kumdlali weMdlali A esikhundleni. Oku kubangela ibhola ezayo kumdlali we-Play B edlala elbow ukusuka kwinqanaba elihlukile-ngaphezulu kunomzimba wakhe.
Ukuba uMdlali B akakwazi ukubuyela kwindawo engadlali, uMdlali A unqwenela ukudlala ibhola kumdlali weMdlali B ngokudlala ibhokhwe okwesibini, ezama ukumbamba ngaphezulu kwesikhundla. Ukuba Umdlali A uphumelele, kufuneka abe nomnqoli olula xa eguqula ukuqhuma kwe-angle, kuba uMdlali B akanako ukufikelela kwibhola.
Dlala i-Stroke eyongezelelweyo ye-Drill Technique
I-Stroke eyongezelelekileyo ye-Drill Technique. © 2008 uGreg Letts, onikwe ilayisenisi kuAng.com, Inc.
Ngethuba loqeqesho okanye umdlalo wokudlala, xa umdlali wakho wenza iphosakelo, nokuba uyayibetha ibhola emnatha, etafileni, okanye ayilahlekanga ngokupheleleyo, musa ukuyeka. Endaweni yoko, misela ukuba uluphi uhlobo lokudubula ayezama ukudlala, uze uhambe kwaye udlale isithintelo somthunzi njengokungathi uye waphumelela kwimizamo yakhe.
Uya kufunda ukufumana kwakhona kwaye uqhubeke udlala le ngongoma emva kokushaya iphosi epholileyo. Akusekho kwakhona ukuma kwaye ulindile emva kokutshabalalisa ibhola njengoko umchasi wakho engayiboni ibhola etafileni, kodwa awukwazi ukubuyela kuyo ukuze uyifinyelele!
Uza kuba ukulinganisa ukudlala kumdlali ongezantsi kakhulu kunokuba umchasi wakho empeleni, kuba uya kufuneka uhambe kwaye udlale esinye isithintelo kuyo yonke i-rally. Nangemva kokutshulwa okusemandleni akho, kuya kufuneka uphinde uphinde uhambe, uphume endaweni kwaye udlale enye imivimbo yesithunzi.
Uya kufumanisa ukuba iimeko ezithintekayo kwiindawo zakho ezithandayo ezithandwayo zenza ukuba unxamnye nabaphikisi abangcono, abakwazi ukubuyela ezi zihlwele. Uya kuba nolwazi xa unako ukuhlaselwa ngokupheleleyo ekuhlaselweni, kwaye xa kufuneka ulungelelanise ukuhlaselwa kwakho kwaye uvumele ixesha lokubuyela kwindawo yokudlala ibhola elilandelayo.
Ekubeni i-stroke eyongezelelweyo yintlanzi yesithunzi, kufuneka ukwazi ukunikela ingqalelo ngokupheleleyo ekusebenziseni umgangatho ongezantsi kunye nezobuchule, njengoko akudingeki ukuba utshise ibhola.
Uza kusebenza kancinci kunokuba kuqhelekileyo, ekubeni ungeze esinye isilonda esithile kwi-rally nganye. Oku kunokuba luncedo kumdlalo wakho wokuqina, kwaye uya kusetyenziswa ukudlala iireglidi ezide kunokuba uninzi lwabachasi bakho.
Uqeqesho lweTable Tennis kubaQaleli
Yiyiphi i-Tees ye-Tees omele uyidlale kwiGrafu?
Uluhlu lwe-FA Cup Winners
Izinto Eziyisixhenxe Okufuneka Uzazi NgoBhotile
Uphi umqhubi we-Hole-in-One?
Indlela iFomathi yeGrafti yeBafana yeBhola eFlezulu yeBhola emiBhulu yeBhola emi-2
Ukugcina i-Painting Creativity Journal
KwiNyuvesi yaseOlivet Nazarene
Indima kaRhulumente wase-US ekukhuselweni kwendalo
Ubungakanani Ubungakanani Bama-Manga?
Ukuhlaziywa kweeNcwadi eziMathathu
Abathandi Bomoya: i-Incubus ne-Succubus
Mayelana noLouis Sullivan, uMcwangcisi